1. Beddelaan NTSC in Pal
2. Beddelaan Pal in NTSC
3. Pal ama NTSC
> Resource > DVD > Pal in NTSC Converter: Sida loo badalo Pal in NTSC
Tan iyo markii aad halkan ku sugan yihiin, oo aad ogaataan in kumuunayaasha iyo NTSC yihiin nidaamyada television analog kala duwan loo isticmaalo dal oo kala duwan. NTSC waxaa loo isticmaalaa in inta badan North America, qaybo ka mid ah South America (Brazil, Argentina, iyo French Guiana marka laga reebo), South Korea, Taiwan, Japan, iwm, halka heesaaga waxaa ku dayanaya dalalka ugu badan ee adduunka. Pal iyo NTSC sokow, SECAM waa hab kale oo loo isticmaalo inta badan by France, Bariga Yurub iyo dalalka Africa galbeedka badan.
In badan oo naga mid ah ma awoodi doonaan in ay la aqoonsado farqiga u dhexeeya NTSC iyo Pal. Laakiin waxaad ka heli doontaa in Pal ah formatted DVD ma ciyaari doonaan ciyaaryahanka NTSC DVD ah, video Pal la harjadaya la baararka madow, oo u qabtay TV-ga Yurub ma shaqeyn doonaan oo dalka Mareykanka ah. Si aad u qabashada dhibaatooyinkaas, aad leedahay si loogu badalo Pal heerka NSTC si aad u daawato videos on your TV. Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida ay u badalaan Pal in NTSC video socon ama DVD la Wondershare Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac) . Download ay maxkamad free halkan.
Fiiro gaar ah : Hoos hage qaadataa shaashada Windows ah, tusaale ahaan. Tallaabooyinka isbedelka Pal in NTSC u Mac waxaa same.Just u hubiso in aad hesho version saxda ah.
Talaabada 1: Load Pal video ama DVD ilaa barnaamaj
Burcad Pal in ay Converter NTSC iyo riix "Add Faylal ay" ama "DVD Load" menu on sare ee interface in ay ku shuban files video ama DVD filimada. Habka kale waxaa jiiday ilaha Pal video files barnaamijka. Tani Pal in Converter NTSC taageertaa beddelaad Dufcaddii. Sidaas daraadeed waxaad u jiidi karo wax ka badan hal file barnaamijka si loogu badalo Pal video in NTSC hal mar.
Talaabada 2: isbedel NTSC
Faraqa ugu weyn ee u dhexeeya Pal iyo NTSC video yihiin xallinta iyo heerka jir. NTSC ayaa go'aan 720x480 iyo framerate ah 23,97. Sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay inaad u samaysaa saldhigyo NTSC ee "Settings" hadal ka dib xulashada qaab wax soo saarka ah ee video. Si kastaba ha ahaatee, haddii qaab wax soo saarka ayaa la filayaa inuu DVD, ma jirto baahi loo qabo in la beddelo xallinta iyo framerate goobaha. Waxaad heli doonaa fursad u Standard TV ah in ay beddelaan badalo DVD Pal in NTSC DVD, ama NTSC DVD in ay Pal DVD.
Si aad u dooratid qaab wax soo saarka ah, guji "Qaabka Output" doorasho dhinaca midigta iyo doortaan qaab video ka "qaab"> "Video" liiska a. Si aad u samayso video ah NTSC-socon, guji "Settings" doorasho, iyo goobaha ka dhigi doonaa sida hoos ku qoran:
Qaraarka : 720 * 480 pixels
Rate jire ah : 23,97 fps
Haddii aad loogu badalo Pal in NTSC DVD, ka dib markii aad soo dhoofsadaan file video ee "Guba" interface ah, riix "More" on xaq u hooseysa interface ka si loogu badalo Pal in NSTC DVD formatted. Change DVD calaamadda, muuqa, Video Tayada, iwm ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa haddii loo baahdo.
Beddelaan Pal in NTSC Talooyin : Barnaamijku wuxuu kaloo ku siiyaan dhammaan qalab caadi video tafatirka. Haddii baararka madow ay muuqan, aad si fudud u noola video si ay ugu fiican ee ku haboon shaashadda TV aad. Xaqa guji video la doonayo iyo dooran "Edit" khiyaar qalabka.
Tallaabo 3: Ka billow Pal in ay diinta ka NTSC
Marka goob qaab saarka la dhammeeyo, guji badhanka Beddelaan (dhuftay "Guba" badhanka haddii DVD waxaa doortay) hoose ee interface ugu weyn, Pal si Converter NTSC dhameystiri doona qaab beddelidda fudud oo degdeg badan.
Marka Pal in ay diinta ka NTSC dhamaato, markaas ka dib waxaad ka ciyaari kara ee wax soo saarka video files aad NTSC ciyaaryahan DVD socon iyo set TV.